Dadka: "Waxaad leedahay gabar": Muriel Robin wuxuu ka dhigayaa Guvidence inuu nool yahay Jean-Marie Bigard ka dib markii uu si kaftan la'aan ah u galay dumarka - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Dadka:" Waxaad leedahay gabar ": Muriel Robin wuxuu ka dhigaa Guilean inuu nool yahay Jean-Marie Bigard ka dib markii uu kaftan aan habooneyn oo ku saabsan dumarka
Dadka: "Waxaad leedahay gabar": Muriel Robin ayaa ka dhigaysa Jean-Marie Bigard inay dareento dambi kadib markii uu kaftankiisa qaldan ka siiyay haweenka.
Iyagoo ka soo horjeedda waxa qofku u malayn karo, Muriel Robin iyo Jean-Marie Bigard hadda waa saaxibbo. Tan iyo kaftankiisii ​​caanka ahaa ee ku saabsan rabshadaha ka dhanka ah haweenka, hadda runtii ma dhexmarayo labada.
Uriикация от Muriel Robin Rasmi (@mumurobin) 6 Dec 2018 ee 10: 42 PST
Dhawaan ayaa lagu casuumay gudaha C adiga, Aktarada la dagaalanta rabshadaha ka dhanka ah haweenka, ayaa ku guuldareysatay inay ka hadasho xiriirkeeda majaajillada.
Uriикация от Muriel Robin Rasmi (@mumurobin) 1 Okt 2018 ee 11: 59 PDT
Hadday wali u muuqato inay ka xanaaqsan tahay Jean-Marie Bigard, Muriel Robin waxay heshay hab kale oo ay ku tusiso sida aan habooneyn kaftankiisa:
Waxaad leedahay gabar, runti waxaan kuu rajeynayaa inaan maalin uun jiri doonin, wixii aad sheegtay - kaftankaan wanaagsan - wiil yiri naftiisa '' hagaag, waan sameyn doonaa '' oo taasuna kuma dhici doonto gabadhaada. Runtii tani waa dhan oo aan kuu rajeynayaa maxaa yeelay waxaad noqon doontaa qof aad u faraxsan.
Публикация от @dilancelikholding 9 SEN 2019 ee 9: 36 PDT
Aktarada sanadaha 62 waxay sidoo kale carabka ku adkeysay inaysan sii wadin xiriir saaxiibtinimo oo ay la leedahay majaajillaha. "Ereyga 'saaxiib' Waan u arkaa inay waxoogaa meesha ka jiraan," ayay raacisay.
Икация от Leeroy (@the971 sawir qaade) 29 AUG 2019 ee 12: 14 PDT
Miyay awoodi doonaan inay aasaan daboolka hal maalin? Maxay kula tahay Fikradaada kula wadaag faallooyinka.
Amiir Harry: sawirkan halsano ee hooyadiis Lady Diana qu
PHOTOS. Tina Kunakey, Claire Chazal, Linda Hardy: Xiddigaha ayaa isu abaabulay Maalinta Charity